प्रख्यात चिनियाँ लेखक स्य्वे मोको दोस्रो पुस्तक ‘समिपमा प्रेम’ « Pariwartan Khabar
प्रख्यात चिनियाँ लेखक स्य्वे मोको दोस्रो पुस्तक ‘समिपमा प्रेम’
12 June, 2022 1:29 pm
काठमाडौं । प्रख्यात चिनियाँ लेखक स्य्वे मो को दोस्रो पुस्तक ‘समिपमा प्रेम’ नेपाली बजारमा उपलब्ध भएको छ ।
काल्पनिक उपन्यासमा आधारित लेखक मो को ‘समिपमा प्रेम’ मृत्युहिन, बज्रहृदय भन्ने उपन्यास भित्रका ३६ वटा पत्राचार अनुसार राखेर बनाईएको पुस्तक हो । पुस्तकको पाँच मध्ये करिव चार भागमा नेपाल (काठमाडौं उपत्यका) की सरस्वतीले तिब्बतबाट आएका बुद्ध धर्मका साधकलाई लेखेका पत्र छन् । अनुवादक डा. सर्वाेत्तम श्रेष्ठ लेख्छन्, “स्य्वे मो कतिचोटी काठमाडौं आउनुभयो, कति बस्नुभयो मलाई थाहा छैन । काठमाडौं उपत्यकाको परम्परागत संस्कृतिबारे वहाँलाई कसले स्पष्ट जानकारी दियो त्यो झनै थाहा छैन । ठाउँलाई आधार बनाई सोही ठाउँको भूतकालीन परिवेश र घटनाबारे उपन्यास लेख्नु सहज कुरा होइन । अझ त्यसरी लेखिएको उपन्यास त्यहाँकै भाषामा अनुवाद गराई प्रकाशित गर्न त ठूलो साहस चाहिन्छ । स्य्वे मोले त्यो साहस गर्नुभएको छ ।
मेरो जन्म काठमाडौं उपत्यकाको पाटन शहरको केन्द्रमा भएको हो । त्यसैले उपन्यास अनुवाद गर्ने क्रममा धेरै पटक आफ्नो बाल्यकाल वितेको ठाउँमा पुनः मानसिक भ्रमण गरेको अनुभव भयो । उपन्यासमा वर्णित परिवेश र मेरो वाल्यकालको स्मृतिबिच कतिपय ठाउँमा ठूलै भिन्नता नभएको भने होइन् ।”
चीनमा अध्ययन गरेर मेडिकल डाक्टर बनेका सर्वाेत्तम श्रेष्ठ चिनियाँ भाषामा दख्खल राख्ने व्यक्ति हुन् । विभिन्न ग्रन्थहरुको नेपालीमा अनुवाद गरेका डा. श्रेष्ठले अनुवाद गरेको स्य्वे मोको पछिल्लो नेपाली पुस्तक ‘समिपमा प्रेम’ उनले नै अनुवाद गरेका हुन् ।
अनुवादित कृतिलाई भाषिक सम्पादन गरेर पत्रकार प्रमोद न्यौपानेले पुस्तकलाई सरल र पठनयोग्य तुल्याएका छन् ।
५० भागमा विभाजित पुस्तकमा डा. श्रेष्ठको अनुवाद अनुभव र सम्पादकको तर्फबाट आभार गरी दुई भाग थपिएका छन् ।
टाईम्स ईन्टरनेशनल प्रकाशन प्रा.लिले सार्वजनिक गरेको पुुस्तकको बजार मूल्य रु.३८५।– छ भने पुस्तकमा १०६ पृष्ठ समावेश गरिएका छन् ।
स्य्वे मो महाशयको “देवीका प्रेमपत्रहरू” अनुवाद गर्दाको अनुभव
लण्डनको पुस्तक मेलामा चिनियाँ लेखक सुयमोका कृतिहरु प्रदर्शन
गरिबलाई नछोएको यसपालिको बजेट !
बूढानीलकण्ठमा नगरप्रमुख र उप-प्रमुखलाई कर्मचारीहरुबाट स्वागत
पदभार ग्रहण गरे लगत्तै जेष्ठ नागरिकहरुलाई घरमै बृद्ध भत्ता वितरण गर्दै वडाध्यक्ष श्रेष्ठ